Waa maxay sawir-gacmeed | Hal-abuurka khadka tooska ah
Hubaal waad garanaysaa waxa sawir-gacmeedku yahay. Laakiin waxa ugu nabdoon ayaa ah inaadan waligaa tixgelin muhiimadda ay leedahay arrintan. Runtii ma garanaysaa dhammaan faa'iidooyinka ay ku siinayso? Ma isticmaashay marar badan?
Haddii aad rabto ogow waxa sawir-gacmeedku yahay, isticmaalka ugu muhiimsan ee uu leeyahay iyo sababta ay u tahay qalab aad waxtar u leh mashaariicda waxaan kuu sheegaynaa wax walba.
1 waa maxay sketch
1.1 Astaamaha sawir-gacmeedka
2 Maxay tahay sawir-gacmeed?
3 Noocyada sawir-gacmeedka
4 Sida loo sameeyo sawir-gacmeed
Aan ku bilowno in aan marka hore ogaano sida saxda ah ereyga sawir-gacmeedka loola jeedo. Marka loo eego RAE, sawir-gacmeedku wuxuu noqon lahaa:
Mashruuc ama qoraal guud ka hor inta aan la fulin shaqo farshaxan. Soo bandhigid kooban ee sifooyinka ugu muhiimsan ee shay.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan dhihi karnaa taas waa mashruuc qabyo ah oo la fuliyay si loo qeexo fikrad iyo, iyada oo loo marayo, samaynta isbeddelada lagama maarmaanka u ah si loo qeexo mashruuca iyo naqshadeynta lafteeda.
Waxaa ka mid ah sifooyinka, iyo waxa qeexaya sawir-gacmeed, waxaan ka heli karnaa kuwan soo socda:
Waa a sawir aan dhammayn. Dhab ahaantii, waa mid aan qummanayn, ma dhammaystirna waxaana laga yaabaa in si degdeg ah loo sameeyay si fikradda loo muujiyo laakiin iyada oo aan 100% qeexin. Taas macneheedu waxa weeye in shaqada ugu dambaysa iyo sawir-gacmeedku aad uga duwanaan karaan midba midka kale.
Waa shaqo yar oo aan tafaasiil badan lahayn. Waa qiyaasta koowaad ee waxa aan ku gaari karno fulinta fikraddaas.
Way qabtaa gacan xor ah ama qalab, laakiin had iyo jeer aad u dhaqso badan oo si liidata loo qeexo.
Waxaad awoodi kartaa noqo wax ka badan hal sawir. Sababtoo ah waxaan isticmaalnaa fikrado kala duwan waxaanan ku qeexnaa dhamaantood sawir-gacmeedyo.
Maxay tahay sawir-gacmeed?
Hubaal, marka la qeexo eraygan, waxaad mar hore lahaan doontaa fikrad ah waxa isticmaalka in la siiyo sawir-gacmeedka. Tanina waa loogu talagalay in la naqshadeeyo, qaab horudhac ah, mashruuc, sida caadiga ah mid nakhshad.
Tusaale ahaan, bogga shabakadda waxay faa'iido u yeelan doontaa in la ogaado sida mawduuca shabakadu noqon doono, halka wax walba la dhigi doono, iwm. Daboolka dhexdiisa, walxaha la abuurayo waxaa lagu qeexi karaa; ama sawir ahaan, ka bixi buraash fikradda uu qoraagu leeyahay.
Dhab ahaantii sawirku wuxuu noqonayaa talaabada ugu horeysa si aad u rumowdo fikradda madaxaaga ku xeeran. Sidaa darteed, waxay noqotaa aasaaska ay shaqadu ku bilaabato, horumarinta tusaalooyinka ilaa laga gaarayo naqshadda ugu dambeysa, si faahfaahsan, faahfaahsan oo si fiican loo sameeyay.
Wax aysan aqoon-yahanno badan ogeyn ayaa ah inay jiraan dhowr nooc oo sawir-gacmeedyo ah. Dhab ahaantii waxaa jira saddex nooc, inkastoo xaaladaha qaarkood ay jiraan hadallo ku saabsan laba kale. Kuwani waa:
sawir qalafsan. Waa matalaad fikrad laakiin leh qabyo aad u khaldan, oo aan lahayn wax tafaasiil ah. Waxay u egtahay inay tahay qalfoofka fikradda aad maskaxda ku hayso.
sketch dhamaystiran. Waa tallaabo dhaaftay tii hore. Xaaladdan oo kale waxaan ka hadlaynaa sawir-gacmeed leh faahfaahin yar oo dheeraad ah oo ka sarreeya dhammaan wax badan oo sax ah. Waxaan dhihi karnaa in ay tahay naqshad qallafsan laakiin iyada oo fiiro gaar ah loo leeyahay faahfaahinta iyo xitaa farsamooyinka iyo qalabka loo isticmaali doono naqshadda ugu dambeysa ayaa la isticmaalaa.
Naqshad caajis ah. Mar labaad, tallaabo kale. Midkan tafaasiisha iyo saxnaanta ayaa aad uga weyn waxayna ka dhigayaan ku dhawaad ​​inay u ekaadaan natiijada ugu dambeysa ee mashruucaas. Xaaladdan oo kale, waxa ku guulaysta waa in lagu shaqeeyo saameyno kala duwan ama farsamooyin si loo arko sida ay u ekaan lahayd iyo waxa noqon lahaa doorashada ugu fiican.
Sawir-gacmeedyo kale oo aanu helnay waa:
Sawir gacmeed Si gaar ah diiradda loogu saaray sawir-gacmeedka wejiyada halkaas oo, ka duwan kuwii hore, ay jirto saxnaan weyn oo ku jirta astaamaha muhiimka ah, in kasta oo sawirka iyo sawirka u dambeeya ay wax yar ka duwanaan karaan.
sketch sawir. In badan oo diiradda lagu saaray dhismaha sababtoo ah marka laga soo tago qabyo-qoraalka, waxa ay ka kooban tahay cabbirro sax ah oo ku saabsan sida mashruucaasi u dhammaanayo.
Sida loo sameeyo sawir-gacmeed
Si aad sawir-gacmeed u samayso uma baahnid waxyaabo waaweyn. Qalin iyo warqad waxaad haysataa wax ka badan oo kugu filan sababtoo ah waa wax ay tahay inaadan faahfaahin badan ka bixin. Ugu badnaan, caag haddi aad khalad samayso. Laakiin, si aad u abuurto sawir-gacmeed, waa inaad raacdaa tillaabooyin taxane ah.
Sawir gacmeed lagama abuuri karo meel eber ah, sababtoo ah markaa ma shaqeyn doonto. Tusaale ahaan, haddii laguu igmado inaad naqshadayso calaamadda alaabta, ma qaadan kartid oo ma samayn kartid sawir-gacmeed haddii aanad fikrad hore lahayn.
Waa fikradda ku siinaysa qalabka aad ku bilowdo shaqada. Waxaad ka fekeri kartaa sida ay calaamadaas noqon doonto, ha ahaato afar gees, leydi, wareegsan ama qaabab kale. Iyo waxa gudaha ku jira.
Sidaan horay idiinku sheegnay warqad iyo qalin baa ka badan. Laakin waxa kale oo ay noqon kartaa in aad door bidayso in aad ku samayso tignoolajiyada. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu talinayaa kiniinka digitizing, waxay kuu ogolaanaysaa inaad sawirto oo tan waxaa lagu qabtay shaashadda kombiyuutarka.
Si tan loo sameeyo, waxaad u baahan doontaa barnaamij kuu ogolaanaya inaad sameyso, sida Autodesk Sketchbook ama Procreate (kan dambe oo ah kan ugu caansan), iyo sidoo kale stylus.
Waxaan sheegnay in sawir-gacmeedku yahay sawir qallafsan, oo aan sax ahayn, aan tafaasiil lahayn... Kaliya dulmar ama qalfoofka waxaad rabto inaad naqshadayso.
Laakiin waa inaad tixgelisaa farsamada, sababtoo ah La mid ma aha in la sameeyo sketch degel marka loo eego calaamadda, ama badeecada. Ama banner.
Moodooyinka, isbeddellada, xeeladaha suuq-geynta... waxaas oo dhan waxay soo gudbin doonaan sawirka si aan u isticmaalno farsamo aan ognahay inay shaqeyso. Calan leh qaabka rinji caadi maaha; mareegaha aad ku xad gudubto sawirada ama sawirada marka ay tahay latalinta shaqada, midkoodna. Ma fahantay waxaan ula jeedno? Mid waa inuu Fiiro gaar ah u yeelo bartilmaameedka, taas oo ah in la nashqadeeyo iyada oo lagu salaynayo waxa macmiilka iyo tartanka mashruuca ay u isticmaali karaan in badan oo ay raalli ka yihiin.
Sida aad arki karto, sawir-gacmeedku waa shay aad u fudud in la fahmo qof kastana wuu isticmaali doonaa marmar. Laakin haddii aad tahay naqshadeeye garaafeed ama aad leedahay xirfad ay tahay in aad macaamiishaada u barato doorashooyin kala duwan, sawir-gacmeedku wuxuu noqon karaa qalab wanaagsan haddii aad taqaanid sida si wanaagsan loogu isticmaalo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » waa maxay sketch
Barnaamijyada ugu fiican ee lagu sameeyo animations